Alaghachi na mmalite nke ikpe ziri ezi na omume: Maat - AFRIKHEPRI
La maâ.t sitere n'okwu ngwaa Ghar (MEI na Coptic na MEI ma ọ bụ MEYI na ụfọdụ asụsụ Bantu, ọbụna Ma nọgidekwara). Okwu pụtara ngwaa bụ " bụrụ eziokwu". E nwere mmalite nke eziokwu (Maat) n'echiche ndị ọzọ. Ma gịnị ka ọ pụtara? bụrụ eziokwu«,« bụrụ eziokwu«,« ihe n'ezie, n'ezie » (wnnw maâ) site mmegide ihe bụ ụgha«Iji« kedu ihe bụ akụkọ ifo".
Na nke mbụ ya, ịkwalite Maat bụ ihe ngosi Unu-Gharnke ahụ bụ, "ihe bụ eziokwu".
Iji kwalite ihe bụ eziokwu bụ ịkwalite Ọmụma, Sayensị; ọ na-enyere aka iweghachite Historical Truth (History) na Eziokwu Eziokwu (nkà mmụta sayensị).
Nye ndị Ijipt oge ochie, Maat nke chi nwanyị na-eyiri nnụnụ enyí nnụnụ, bụ ihe nnọchianya nke eziokwu ahụ, ìhè, nkwekọrịta zuru ụwa ọnụ n'usoro iwu anụ ahụ na nke omume, ọnọdụ nke ka ọ bụrụ ihe niile dị mma.
Ị bụ ezi omume a, nke pụtara na Ala Chineke Oh! ọnwụ; Osiris wetara Horus, onye o tinyere n'elu ya, maka ihe akaebe nke olu ezi omume, bụ onye na-anụ olu megide ndị iro ya ...
Ọ bụ ìhè nke na-enye ụwa ìhè site na ume nke ikpe ziri ezi na ndụ, nke na-emegide echiche niile nke ikpe na-ezighị ezi, omume rụrụ arụ nile, mmejọ niile. Ọ bụ nri mbụ nke onye ọ bụla dị ndụ na nke chi niile, ọ bụ ụgwọ ọrụ nke ndị ezi omume n'ihu Ụlọikpe Chineke nke Osiris. Maat sitere na Maa verb, Mei si Coptic na Meyi si na ụfọdụ asụsụ Bantu. Iji nweta ihu ọma nke Maat bụ ịkwado ihe bụ eziokwu, iji meziwanye akụkọ ihe mere eme, eziokwu bụ eziokwu bụ ịkwado sayensị, ihe ọmụma.
Ma'at pụtara n'onwe ya ihe omume, eziokwu, ezi, nkwanye ùgwù na nha nhata. Ọ bụ ndị na-abụghị nke ihe ọjọ, ogbaaghara, ụgha na falsifications niile, ọ bụ n'ihi na otu onye bụ onye na-akwado, na ọ bụ ịchọ ọdịmma onwe na anyaukwu, ọ na-atụ aro na mmadụ ikpe ziri ezi n'ihi na " ọ na-akọwa dị ka iwu n'etiti ya (nwoke) na onye okike. The nzube nke mmadụ na ụwa bụ ịnọgide na-enwe nguzozi (n'etiti nwoke na nwanyị na ọma na ihe ọjọọ) nke e kere eke site iwu Chineke. Mgbe nguzo a dara, anyị na-ahụ mmebi mmekọrịta ọha na eze na ọdachi dị egwu maka okike; nke nwere ike ịkọwa site na ọdịda omume na Chineke. Iji kụziere Ma'at bụ ime ihe ziri ezi maka ọdịmma mmadụ.
Taa, a na-achọta n'Africa ụfọdụ ntụziaka dịka ụkpụrụ nke Ma'at dị ka "Ubuntu" bụ ndị a na-etinye n'ọrụ usoro ndozi nke ndị ojii na ndị ọcha site na njedebe nke apartheid (omempụ, ịkpa ókè agbụrụ na ọchịchị obi ọjọọ nke Ugbo) na South Africa.
Maat-eduzi anyị ndụ n'ụwa iji kwe ka anyị na-ikpeazụ laghachi Chineke (Ra), na n'ihi na ọ dezie na 42 nyere n'iwu nke dabeere: akwanyere onwe, dị nnọọ iche na-enye ohere maka okwu na ezi udo.
UGWU NA MAS
22,00€ dị na ngwaahịa
2 ọhụrụ site na 22,00 €
dị ka Mee 26, 2020 4:13
Ụbọchị mwepụta 2016-03-08T00:00:01Z
Publication Ụbọchị 2016-03-08T00:00:01Z
Atiya UZI NA NDỊ EZIOKWU
Cha cha asaa na ozu asaa ahu nke Man
Tao The King - Book of the Way and Virtue
Iwu nke uche - Dan Millman (Audio)